Korri paartileen Oromoo 'haala qabatamaa naannichaafi cee'umsa gara dimokiraasii irratti' xiyyeeffate taasifame - BBC News Afaan Oromoo
Dhaabileen siyaasaa Oromoo mata-duree "Haala qabatamaa naannoo Oromiyaafi cee'umsa gara dimokiraasii" jedhuun kora taa'anii turanjiru.
Mariicha irratti mata-duree 'Eessa geenye?' jedhun haasaa kan taasisan Pirof. Hizqi'eel Gabbisaa "Uummanni Oromoo yaada tokko jalatti hiriiruun isaafi nagaafi dimokiraasii kan barbaadu ta'uusaa addunyaaf agarsiisuun isaa jabina uummatichi yeroo ammaatti qabudha," jedhan.
Qoqqoodamuun siyaasa Oromoofi hanqinni hooggansa bira jiru laafinawwan siyaasa Oromoo keessatti mul'atan ta'uu isaanii himan.
Sodaafi laafiinni siyaasaa, diinagdeefi nageenyaa akka jiru kan himan Pirof Hizqi'eel Gabbisaa dadhabinawwan gama siyaasaan jiran furuu, diinagdee biyyaa cimsuufi paartileen siyaasaa rakkoolee nageenyaa mul'atan dhabamsiisuuf walin hojjechuu qabu jedhan.
Dhaabbileen siyaasaa Oromoos hammeenya hojjechuurraa of eeguufi wal qoqqoodu dhiisanii harka wal qabatanii waliin hojjechuu akka qabanis dubbataniiru.
Kana malees, dhaabbileen siyaasaa Oromoo gahumsa horachuufi filannoo mo'atanii biyya bulchuuf hojjechu qabu jedhaniiru.
Hirmaattota mariisisaa kan jiran Obbo Lammaa Magarsaa, Piresidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa gama isaanitiin, "biyyi kun akka biyyaatti itti fufuuf yookin diigamuuf yeroon cee'umsaa kun murteessaadha" jedhan.
Uummanni Oromoo yaada tokko jalatti hiriiruun isaafi nagaafi dimokiraasii kan barbaadu ta'uusaa addunyaaf agarsiisuun isaa jabina uummatichi yeroo ammaatti qabudha
Hizqi'eel Gabbisaa, Piroofeesera
Kanaafuu cee'umsi gara dimokiraasiitti taasifamu akka milkaa'uuf dhaabbileen siyaasaa Oromoo wal hubannoofi wal deeggaruun hojjechuu qabu jedhan.
"Qaamni aangoo mootummaa akka qabeenya dhuunfaatti qabatee jiraachuu barbaaduufi rakkoon keessoo keenyaa qormaata yeroo ce'uumsaa kanatti nu mudatee jirudha" kan jedhan Obbo Lammaan waliin hojjechuun dhaabbilee siyaasaa Oromoo dhimma barbaachisaa ta'uusaa himan.
Mootummaanis hanga ammaatti rakkoolee naannicha keessatti yeroo yeroon mudataa turan tasgabbeessaa ture malee gaafii uummataa deebiisuu hin eegalle jedhan.
"Uummanni sagaleesaa dhageesisuun isaa sirriifi barbaachisaadha. Haata'u malee, waan kana eenyutu nurratti deemsisaa jira kan jedhu irratti hubannoon qabnu wal-qixa miti" jedhan.
Hiriirrawwan kunis ajandaawwan biraatiin geeddaramaa jiraachuufi mootummaaf yaaddoo ta'uusaa himan.Dhaabbileen siyaasaa Oromoo haala mijaa'e keessatti dorgomuu qofa osoo hin taane haalli mijataan akka uummamuuf hojjechuu qabnas jedhan Obbo Lammaa Magarsaa.
Mootummaa kana tumsuun cehuumsa kana bakkaan gahuun murteessaadha
Xiinxalaa siyaasaa Obbo Jawaar Mohaammed fuula Feesbuukii isaaniirratti kora paartileen siyaasaa Oromoo har'a taasifatan kan akka barreessanitti, jalqabbii gaariifi marii bu'a qabeessa ta'edha jedhan.
"Waltajjiin kun ji'oota heddu dura waan eegalu qabu ta'us amma jalqabuunuu waan guddaadha," jedhan.
Ergaan ijoo walhga'icharratti darbanis kora kana irratti ka'anis, injifannoo qabsoo waliin argame waliin tiikfachuun barbaachisaa akka ta'eefi jeeqamuun nageenya Oromiyaa nu hundaaf balaa hamaa akka qabu dhaamameera.
Obbo Jawaar akka barreessanitti, mootummaa kana tumsuun cehuumsa kana bakkaan gahuuf murteessaa akka ta'edha.
Mootummaanis dhaabbilee siyaasaa ofitti qabee of gargarsisuunis murteessaadha
Hoggansi mootummaas dhaabbilee siyaasaa ofitti qabee of gargarsisuun murteessaa ta'uun akkuma jirutti ta'ee dhaabbileen siyaasaa waliin mari'achuufi waliin dalaguun rakkoo nageenyaa furuufi tokkumma saba kanaa cimsuuf murteessaa ta'uunis akka ka'e yaadachiisaniiru.
Itoophiyaatti lakkoofsi namoota Covid-19n qabamanii 655 gahe
Tibbana namni koronaanvaayirasiin qabame daran dabaluun miira akkamii uume?
Dhukkubsattoota Covid-19'n hubamaniif yaaliin abdii kennu eegalame
Finfinneetti tamsa'inni Covid-19 to'annoon ala bahaa jiraa?
Qeerransi funyoon hudhuuf magaalaa keessa ari'atamaa ture baraarame
Koronaavaayirasiin kufaatii hogganoota haaraa Sudaan saaxile
Ilbiisota waggaa 17n booda miiliyoonotaan lafa keessaa ol bahan
Koronaaavayirasii fi Iid aal-Faxiir, suuraalee addunyaarraa